Taratasin'ny mpamaky: Kolikoly anaty fonja
vendredi, 02 mars 2018 08:42
Araka ireny antso nataonao ireny Président Patrick dia vonona aho hijoro vavolombelona amin'ny zavatra niaina taty am-ponja.
Izaho taty Diego no MD, narary mafy aho tao am-ponja, nandeha infirmerie tao dia 22 ny tension tamin'izay, dia hoy ilay Major tamiko, tsy misy zon'olombelona aty fa ianareo gadra no anaranareo.
Dia nitaraina tamin'ny Chef d'établissement ny reniko sy ny vadiko dia nangatahiny 1 million ariary (5 millions fmg) dia avelany hamonjy hopitaly.
- Tsy misy vola izahay hoy neny,
- Dia maty eo izy izany hoy ilay Chef d'établissement.
Tsy kivy anefa ny reniko fa nangataka vonjy tamin'ny DRAP, dia nahazo baiko hoe halefaso hôpital io olona io, dia ni menace-ny i neny hoe ifanena isika.
18 jours zaho tany amin'ny hôpital.
Mangataka vola tamiko indray ilay agent pénitentiaire miandry ahy any amin'ny hôpital, dia tezitra aho hoe tsisy vola, dia sosotra izy sady milaza hoe tsy hiala ato amin'ny hôpital ato anga ka tsy hiverina any am-ponja.
Hendrikendrika moa no nampigadra ahy fa afaka madiodio fa lany 23 millions fmg vao nilamina.
Tsy notenenin'ny vadiko tamiko, fa rehefa taty afara efa nivoaka ny fonja zaho vao notantarainy, izy efa bevoka talohan'izaho nosamborina, ilay Mpitsara tao amin'ny parquet nilaza fa izy no andriamanitra, dia hoy ny vadiko taminy, ampisehoany anao ny voninahiny, dia hoy ilay Mpitsara, gadraiko vadinao.
Marihiko fa na ny avocat nalaiko aza dia corrompu raha ny tantara henoko taty afara, mifanaraka amin'ilay Mpitsara izy dia samy akandreo vola aby ny voapanga sy ny mpitory rehetra.
Ny hitako tao am-ponja dia misy gadra maromaro mody ao isaka hariva fa manome 100 000 ariary isam-bolana.
Mpanatitra vary mandoa vola amin'ny mpiambina fonja, fa raha tsy izany tsy tafiditra varinao, mampanofa kidoro ato anaty fonja, rasoir hanalana volombava andoavam-bola vao tafiditra, misy manana téléphone sy facebook, afaka miresaka tsara amin'ny any ivelany rehefa mandoa vola.
Ny fonja niainako dia fonja ho an'ny manam-bola omena ny mpiambina fonja dia velona ianao, raha tsy manam-bola dia maty, na ny dossier nao aza tsy hita popoka any amin'ny fitsarana.
Zaho efa nampirisihindry zareo hoe miresaka amin'ny lehibe dia milamina, dia hoy aho, za tsy nangalatra, ary temoin zaho no lasa migadra, NAHATRATRA MPANGALATRA NY TENA DIA ZA NAHATRATRA INDRAY ITY NO MIGADRA.
Misaotra Président ary mankahery anao, fa zaho vonona hijoro amin'ny famongorana ity kolikoly ity.